Mmadu ole gha na ala ebe odi na Trabzon? | RayHaber
HomeTurkeyBlack Sea Region61 TrabzonMmadu ole gha na ala ebe odi na Trabzon?
12 / 11 / 2019 61 Trabzon, General, Black Sea Region, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
mmadụ ole ga-ejupụta n’ọrụ ahụ
Ole ka mmadụ ole ga-ekerịta na Trabzon ?; Nzukọ mbụ nke Trabzon Metropolitan Municipality na Nọvemba nwere nnọkọ n'okpuru onye isi nke Mayor nke Trabzon Metropolitan Mun Murat Zorluoğlu.
N'ime obodo, sistemụ obere ụlọ nke obodo dị na-agbagotere ọzọ. Mkparịta ụka na-aga maka ndozi zuru ezu nke usoro dolmush, ebe a na-ahazi usoro ọhụrụ n'ime ọrụ na June nke 2020.
Zorluoğlu kwuru, muş Site na June nke afọ 2020, ụmụ obere ala kwesịrị ka ọ dị mma maka ndị nwere nkwarụ ma dịkwa mma karịa maka ikuku ikuku. Onweghị ugboala ndị eji ugbu a dị ka obere obere osisi ga-enweta iwu kwadoro site na June 2020. Ya mere, iwu choro ime ka ha di ihe. Anyị abịala nso na Ndị Ọkwọ ụgbọala anyị na mbido. Anyị na nzukọ Chauffeurs anyị zukọrọ ọtụtụ oge, kamakwa ndị isi ọdụ anyị niile ma nwee nkwurịta okwu. Anyị ewetala usoro a ruo ugbu a na-enwe ezi uche nke ndụmọdụ zuru ezu. Ebumnuche anyị bụ ebumnuche ebe a bụ ka anyị nweta ndị mmadụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị arụ ọrụla nghọta zuru oke nke dolmism. Ka ọ dị ugbu a, ọ ga-amasị m iji ọ gladụ kwuo na Chaịfeurs Association anyị na ndị isi ọdụ anyị etinye aka ha n'okpuru nkume ahụ. Ana m ekele ha.
E nwere ụzọ ihe atọ ọzọ. Otu n’ime ha bụ na minibuse ndị dị ugbu a ga-aga n’ihu n’iru iweghachi na ọnụ ọgụgụ oche n’enwetaghị abawanye na oche. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, site na ịbawanye ụdị nke ugbo ala, na-eme ka ha bụrụ ndị kwesịrị ekwesị maka ndị nwere nkwarụ, na-abawanye nkasi obi nke sistemụ na-aga n'ihu. Nhọrọ nke abuo bu iwelie onu ogugu oche na 16 + 1 ma belata onu ogugu ugbo ala ma bulie onu ogugu ndi ha na ibe ya na 3.
Dịka ịmara, dolmuş nile na Trabzon nwere ndị mmekọ abụọ. Ndụmọdụ nke atọ bụ ime ka ọnụ ọgụgụ oche dị elu karịa 17 iji bulie ọnụ ọgụgụ ụmụ obere ọnụ ka ọ bụrụ ọkwa ụgbọ ala ọha na iji nye ha ọrụ minibus. N’ime izu ole na ole sochirinụ, anyị ga-enwe ike ịkọwa ndị niile na - esochi anyị maka nhọrọ na ọghọm ha. Mgbe ụfọdụ, a na-enwe akụkọ na akụkọ na azụmahịa a agbanweela Tangle. E kwesịghị ịkwanyere ha ùgwù. Usoro a na-aga n'ihu n'okpuru nhazi anyị. Nyere na ndi anyi nata oru obere odi mma ka anyi mee, uzo onye akuko anyi ha si di anyi nkpa. Mgbe ha na-eme mkpebi a n’etiti onwe ha, anyị ga-eji obi ụtọ na-ekwupụta mkpebi ha ma ọ bụrụ na ha ekwe nkwa na ndị anyị ga-enweta ozi ọma. ”
Obere ụlọ na Samsun agaghị aga OMU
Wepụ obere bọs na-agba ọsọ n'okporo ụzọ BursaRay
2019 İZBAN Oge Maka Oge Gịnị bụ İZBAN Oge emeghe?…
Ndi mmadu '350 Personally Expedition Halisdemir'…
Ntinye akwụkwọ onye ọrụ 1.118 na TCDD: Naanị 5 Alım
Ọdachi Train na Çorlu: 360 maka 563 Train Kişilik
Ileba Ọnọdụ Ọdachi Çorlu, Taa Ndi mmadu nke 600…
Ego ole ka ị ga-akwụ na Samsun
Trabzon Erzincan okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè ga-adị na February